Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zikaLuis Zueco
Ndadibana noLuis Zueco kwi-torrid kunye neZaragoza 23 uEpreli kwiminyaka embalwa edlulileyo. Abafundi abanesiyezi badlula ngePaseo Independencia phakathi kweencwadi ezininzi eziboniswe kolo Suku lukaGeorge oqaqambileyo. Abanye bacele ukutyikitywa kobungqongqo ngelixa abanye beqwalasele kwelinye icala xa kunokwenzeka ...
Ngenye imini ndiza kufika eSagres, nguNélida Piñón
Njengesiqhelo, uncwadi kuhlangulo lweMbali. Akukho nto iya kufunda malunga nexesha lethu elidlulileyo ngaphandle kovavanyo oluyimfuneko loncwadi. Kungenxa yokuba iintsomi zembali zidlulela ngaphaya kweziganeko ezixhasa iziganeko kunye nemihla yazo yamakholwa azinikeleyo ngokusemthethweni. UNélida Piñón usinika ...
Violet, ngo Isabel Allende
Ezandleni zombhali uthanda Isabel Allende, imbali iwuphumeza lo msebenzi wokufikelela kwixesha elidlulileyo elizele ziimfundiso. Nokuba ngaba ezo mfundiso zinyanisekile na, kuba xa siphinda iimpazamo sisebenza kakuhle. Kodwa hey ... Kwenzeka into efanayo nakuwuphi na umbalisi wembali eyintsomi. Ngenxa yokuba abafundi abaninzi ...
Madonna kwiNgubo yeFur nguSabahattin Ali
I-Turkey kukufumanisa okukhulu kothotho lweepasta zamaxesha akutshanje. I melodramas zase Mzantsi Melika zinike indlela kumabali emihla ngemihla kweyona Turkey yaseYurophu. Ayisiyo ukuba le noveli iyajikeleza, kodwa kukho into ekhuthazayo malunga nesiqwenga. Elinye ixesha elahlukileyo kodwa ingxaki efanayo ...
Ukuvuswa koQhekeko, nguRobert Harris
Kuhlala kuza ixesha laxa wonke umbalisi weentsomi zembali egqiba ukujongana nomdlalo wangoku kunye nokuthandabuza okongeziweyo ngenxa yokuseta okumnyama kwamaxesha akude. URobert Harris wayengazukuba yedwa. Kuluntu apho ukholo nemfundiso inyanzelise ...
Iphepha1 Iphepha2 ... Iphepha19 Elandelayo →